DOWNLOAD XBOX 360 JOYSTICK DRIVERS - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Kwado ndị ọkwọ ụgbọala maka Xbox 360
Nsogbu na nbudata nwelite bụ ihe a na-ahụkarị n'etiti ndị ọrụ nke Windows 10 sistemụ arụmọrụ. Ihe kpatara ya nwere ike ịdị iche, ma nke a na-emekarị n'ihi ọdịda Ụlọ Ọrụ Nwelite.
Nwelite mmelite na Windows 10
Enwere ike ibudata emelite na enweghị Ụlọ Ọrụ NweliteDịka ọmụmaatụ, site na saịtị ọrụ ma ọ bụ jiri ọrụ nke atọ. Ma nke mbụ, ị ga-anwale iji dozie nsogbu ahụ na ngwaọrụ ndị a na-agbaso.
Usoro 1: Nchọpụta nsogbu
Ikekwe enwere obere ngwụda, nke enwere ike idozi ya na ọrụ enyemaka pụrụ iche. A na-edozi nsogbu mgbe ọ gụsịrịchara. Na njedebe a ga-enye gị akụkọ zuru ezu.
Pinch Nweta X ma gaa "Ogwe njikwa".
Gbanwee echiche maka nnukwu akara ngosi ma chọta "Nchọpụta nsogbu".
Na ngalaba "System na Nchebe" pịa na "Nchọpụta nsogbu site na iji ...".
Mgbawa ọhụrụ ga-apụta. Pịa "Na-esote".
Ihe bara uru ga-amalite search maka njehie.
Kwekọrịta ịchọ na ikike onye nchịkwa.
Mgbe nyochachara, tinye ncha.
N'ikpeazụ, a ga-enye gị nkọwa zuru ezu banyere nyocha ahụ.
Ọ bụrụ na ịba uru ahụghị ihe ọ bụla, ị ga-ahụ ozi kwekọrọ.
Ngwaọrụ a adịghị arụ ọrụ mgbe niile, karịsịa mgbe nsogbu ndị ka njọ. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọtaghị ihe ọ bụla, mana mmelite adịghị ebudata, gaa usoro ọzọ.
Nzọụkwụ 2: Kọwaa nchekwa melite
Enwere ike ime n'ihi arụmọrụ ma ọ bụ arụnyere arụnyere na Windows 10. mmelite bụ iji kpochapụ ihe nlele melite na iji "Iwu iwu".
Gbanyụọ njikọ Ịntanetị. Iji mee nke a, mepee onyonyo ma chọta akara ngosi iji nweta Ịntanetị.
Ugbu a gbanyụọ Wi-Fi ma ọ bụ njikọ ọzọ.
Pinch Nweta X na imeghe "Iwu iwu (ha)".
Kwụsị ọrụ Mmelite Windows. Iji mee nke a, tinye
ma pịa Tinye. Ọ bụrụ na ozi gosipụtara na-egosi na enweghị ike ịkwụsị ọrụ ahụ, malitegharia ngwaọrụ, ma gbalịa ọzọ.
Ugbu a gbanyụọ ọrụ mbufefe ndabere na iwu ahụ
nkwụsị azụ nkwụsị
Ọzọ, soro ụzọ
ma hichapụ faịlụ niile. Nwere ike ijide Ctrl + Awee kpochapụ ihe niile site na isi Hichapụ.
Ugbu a anyị na-amalite ọrụ nkwarụ na iwu
nkwụsị mmalite ụda
Gbanwuo Ịntanetị ma gbalịa ibudata mmelite.
Ọ bụrụ na ihe kpatara ọdịda ahụ dị na faịlụ cache, mgbe ahụ, usoro a kwesịrị inyere aka. Mgbe emechara ya, kọmputa nwere ike mechie ma ọ bụ malitegharịa oge.
Usoro 3: Windows Update MiniTool
Ọ bụrụ na otu n'ime ụzọ abụọ ahụ enyere aka, mgbe ahụ ọ bara uru iji ụzọ ndị ọzọ. Windows Update MiniTool nwere ike ịlele, ibudata, wụnye mmelite na ọtụtụ ndị ọzọ.
Download Windows Update Utility MiniTool
Ugbu a, pịa bọmbụ. Họrọ "Wepụ ihe niile ...".
Na windo ohuru pịa "Wepu".
Mepee folda ahụ a na-enweghị ike ma mepụta nsụgharị ahụ dabara gị na bit.
Ihe omumu: Kpebisie ike onodu ogugu
Melite ndepụta nke nbudata di.
Chere ruo mgbe njedebe nke ọchụchọ ahụ.
Lelee mpaghara chọrọ. Na nchịkọta aka ekpe, chọta akara ngosi ngwá ọrụ.
Mpịghe mbụ na-enye gị ohere ịlele maka mmelite ndị dị ugbu a.
Nke abụọ na-amalite ibudata.
Nke atọ na-akwalite melite.
Ọ bụrụ na ebujuru mpaghara ma ọ bụ tinye ya, bọtịnụ nke anọ wepu ya.
Ihe nke ise na-ezobe ihe ahọrọ.
Nke isii na-enye njikọ iji budata.
N'ọnọdụ anyị, anyị chọrọ ngwá ọrụ nke isii. Pịa ya iji nweta njikọ na ihe achọrọ.
Mbụ, kọwaa njikọ ahụ n'ime nchịkọta ederede.
Họrọ, detuo na mado ya n'ime ogwe aka nke ihe nchọgharị ahụ. Pịa Tinyeịmalite ịpị ọrụ.
Ugbu a ịkwesịrị ịwụnye faịlụ ndozi. Enwere ike ime nke a site na "Iwu iwu".
Kpọọ menu ndị dị na mpaghara ahụ ma mepee "Njirimara".
Na taabụ "General" cheta ma ọ bụ detuo ebe faịlụ.
Ugbu a mepee "Iwu iwu" ya na ikike onye nchịkwa.
DISM / Online / Add-Package / PackagePath: "xxx";
Kama nke "Xxx" dee ụzọ maka ihe ahụ, aha ya na mgbatị ya. Dịka ọmụmaatụ
DISM / Online / Add-Package /PackagePath:"C:UsersMondayDownloadskb4056254_d2fbd6b44a3f712afbf0c456e8afc24f3363d10b.cab ";
Ọnọdụ na aha nwere ike depụta site na njirimara niile nke faịlụ ahụ.
Gbaa bọtịnụ iwu Tinye.
Malitegharịa ekwentị ahụ.
Iji mee ka mmelite di na ọnọdụ okpu na ngwa iji malitegharia, i nwere ike iji iwu nke a:
malite / na-eche DISM.exe / Online / Add-Package / PackagePath: xxx / Quiet / NoRestart
ebe kama "Xxx" ụzọ faịlụ gị.
Usoro a nwere ike ọ gaghị adị ka ihe kachasị mfe, ma ọ bụrụ na ịchọta ihe nile, ị ga-aghọta na ọ dịghị ihe mgbagwoju anya. The Windows Update MiniTool utility na-enye kpọmkwem njikọ ibudata faịlụ CAB nke nwere ike arụnyere na-eji "Iwu Iwu".
Nzọụkwụ 4: Wụlite njikọ dị oke
Njikọ nwere oke nwere ike imetụta nbudata mmelite. Ọ bụrụ na ịnweghị njirimara a, mgbe ahụ ọ ga-enwe nkwarụ.
Pinch Na-emeri + m na imeghe "Network na Internet".
Na taabụ "Wi-Fi" chọta "Nhọrọ Di elu".
Bugharịa ihe mmịfe nke ọrụ kwekọrọ na arụ ọrụ na-adịghị arụ ọrụ.
Enwere ike ijikọta njikọ ebighi ebi "Ngalaba" Windows 10.
Ọ bụrụ na otu n'ime ụzọ ndị a enyere aka, wee gbalịa nbudata mmelite ozugbo site na saịtị ọrụ.
Gụkwuo: Nwelite nbudata onwe gị
Gbalịa gbanyụọ antivirus nke atọ ma ọ bụ firewall mgbe ibudata nwelite. Ikekwe ọ bụ ha na-egbochi nbudata.
Gụkwuo: Gbanyụọ antivirus
Lelee usoro maka nje. Software ọjọọ nwere ike ịbụ ihe kpatara nsogbu ahụ.
Ọ bụrụ na ị dezie faịlụ ahụ n'ụbọchị ụsụụ ndị agha, ị nwere ike mehiere ma gbochie adreesị ndị ị ga-ebu. Gaa na ntọala faịlụ ochie.
E depụtara ndepụta ndị a maka isi edozi nsogbu na nbudata mmelite Windows 10. Ọbụlagodi na ị nweghị ike idozi nsogbu ahụ Ụlọ Ọrụ NweliteỊnwere ike ibudata faịlụ ndị dị mkpa mgbe niile site na saịtị ndị ọrụ.